နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲသတင်း
Posted by မှော်ဆရာ on Dec 3, 2010 in News | 10 comments
ယမန်နေ့က ကျင်းပပြိးစီးသွားသော ရတနာပုံ နေပြည်တော် သတင်းစာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေပြည်တော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခိုင် ခေါင်းဆောင်သော ငါသာအဖ ငါသာ ပထွေး ပါတီ(အတိုကောက် ငါ့ဖထွေးပါတီ) မှ အလှဲနေရာ အများစု(သိပ်မမတ်နှိုင်တော့လို့ လှဲထားတာပါ။) ဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားသည်ဟု မှော်ဆရာ သတင်းဌာနမှ သတင်းရရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခိုင်မှ ပြောကြားရာတွင် — ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ အလှဲလောင်း ဖြိုး ကို ပွဲဆူအောင် အရင်လုပ်ပေးပြီးမှ စွမ်းအားရှင် ဆူးတို့ ၊ ဝေေ၀တို့နဲ့ နပန်းလုံးခိုင်းထားတယ်။ ကိုလုပ်စရာတောင် မလိုဘူးလေ ။ ကို့လူတွေက လက်သံပြောင်ပါတယ်။ နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ ဒါတောင် ကြိုတင်မဲတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်၊ ဟ အားရပါးရ ပြောကြားသွားသည်။
ဦးခိုင်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကပင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သလို ငါသာအဖ ငါသာပထွေးပါတီအား လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထဲ ရှိသောသူပါတီဝင်များဖြင့်သာေ၇ွးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကျွန်တော့ ငါဖထွေး ပါတီမှာ ကျန်တဲ့လက်ချောင်းတွေဘာမှမလိုဘူး ။ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထဲနဲ့ အပေါ်နဲနဲထောင်တတ်ရင် ရပြီဟုလဲ ပါတီဝင်တစ်ယောက်၏ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများကိဲု တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်ထားကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခိုင်မှ ငါ့ဖထွေးပါတီဝင်များအား မိန့်ခွန်းခြွေလေ့ရှိသည်။
အထက်ပိုင်းမှာသာ အောင်မြင်မှုရအောင်မဟုတ်ပဲ အောက်ပိုင်းတွင်လဲ အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် ဦးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု နှင့် ဦးကြောင်ကြီးတို့ အား ဘောင်းဘီချွတ်၍ ငါ့ဖထွေးပါတီ၏ အောက်ပိုင်းနေရာများတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေရာ ဘောင်းဘီမရှိတော့သော ငါဖထွေး ပါတီဝင် ဦးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု နှင့် ဦးကြောင်ကြီးတို့အား ယှဉ်ပြိုင်ရဲသူ မရှိသောကြောင့် အော်တိုမစ်တစ် အနိုင်ရရှိသွားသည်ဟုလဲ သိရှိရသည်။
— အိုး … ဘိုးအေကြီးက ချွတ်ဆိုလို့ ချွတ်တာပဲ။ လုပ်ဆိုလို့ လုပ်တာပဲ ။ တို့ကို ဘိုးအေကြီးက လုပ်သာလုပ် မနိုင်ရင် ဂုံနီအိတ် အကြီးကြီးတွေ ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောထားတာပဲဟာကို ….တို့ကတော့လေ ဘိုးအေကြီးကိုယုံတယ်။ ပြီးရင်လဲ ပါမစ်အကြီးကြီးပေးမယ်လို့ ပြောတယ်ဟု ဦးအောင်ဘုမှ မှော်ဆရာ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။
ေ၇ွးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီတွင်လဲ စွမ်းအားရှင် ဆူး နှင့် ဝေေ၀တို့မှ ခေါင်းဆောင်၍ စည်း၇ုံးရေးဆင်းသည့်အနေဖြင့် ငါ့ဖထွေး မှသာ အင်တာနက်လှိုင်းများ တစက္ကန့် လျှင် 10G အမြန်နှုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်နှိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနှိုင်ကြောင်း ၊ မန္တလေး ဂဇက်အသင်းဝင်များ စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာ ခရီးသွားနှိုင်စေအောင် ငါ့ဖထွေးမှ စေတနာဖြင့် မြေအောက်ခြောက်ပေအနက်တွင် လှိုဏ်ခေါင်းများ ဖောက်လုပ်ပေးထားကြောင်း ၊ လှိုဏ်ခေါင်းထဲတွင် ၀မ်းလှားမှောက်သွားခြင်းဖြင့်လဲ အသင်းဝင်များ ကျမ်းမာရေး မြင့်မားလာနှိုင်ကြောင်း ၊ ငါ့ဖထွေးအား ထောက်ခံခြင်းဖြင့်သာ ဟိုမိုကရေစီ ရနှိုင်ကြောင်း ၊ တခြား ပါတီများကို မယုံစေလိုကြောင်း ၊ ထိုပါတီများကို ယုံကြည်သူများသည် ခေါင်းကို ဆင်နင်းခံရနှိုင်ကာ မိုးကြိုး အကြိမ်တစ်ရာပစ်၍ မဟာအ၀ိစိငရဲတွင် မလွတ်တမ်းကျခံရနှိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးကြသည်။ အတွင်းကျိတ်အနေဖြင့်လဲ ငါ့ဖထွေးကို မခြစ်လျှင် နင့်ဟာလေးကို ညှစ်ပြစ်မယ် ဟုလဲပြောကြားသွားသေးသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေ့လာသူများအနေနှင့် တခြားသူများ မလိုကြောင်း ၊ သတင်းဓါတ်ပုံ ရယူဖို့ ဆိုလျှင် ဝေေ၀ရှိကြောင်း ၊ သူလဲ ဟိုဟိုဒီဒီ ရှောက်ရိုက်နေကျဖြစ့်သဖြင့် သူတစ်ယောက်ထဲဖြင့် လုံလောက်သည် ဟုလဲ သိရသည်။ သို့သော် လေ့လာသူအဆင့်ဖြင့် သတင်းမှတ်တမ်း ရယူလိုကြောင်း ဦးဖက်တီးနှင့် ကိုပေါက်(မန္တလေး) မှ လျှောက်လွှာတင်ရာ မျက်လုံးနှစ်လုံးပါနေသဖြင့် ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်မှာစိုးသောကြောင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ နဲနဲရှည်တတ်သူကိုပေါက် မှ မျက်လုံးတစ်လုံးကို ပလာစတာနှင့် ပိတ်ထားပါမည်ဟု ပြောသေးသော်လဲ ကင်မရာပါ အသိမ်းခံချင်လို့လားဟု ချိုချိုသာသာ မိန့်ကြားသဖြင့် ကိုပေါက်ခမျာ မှားလို့ပါခင်ဗျာဟု ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာလေး ကိုယ်ပိတ်ကာ(ကင်မရာကို ပြောတာပါ) ပြန်ပြေးရကြောင်း ၊ ယခုတော့ ဦးဖက်နှင့် ပေါင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာ လက်ချမ်းသာ မာဆက်များတွင် သတင်းရယူနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ငါ့ဖထွေးပါတီ အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ပါတီ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များအား မှော်ဆရာ သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ နင့်အပူလားဟု အမှော်အမြင်ကြီးစွာ မိန့်ကြားသဖြင့် ပုဆိုးလှန်မပြခင် ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း မှော်သတင်းထောက်ထံမှ သိရှိရသည်.
(မတော်တဆ တမင်တကာ နာမည်တူတွေများရှိရင် စိတ်မဆိုးရ …၊ စိတ်ဆိုးရင် ဘိုးတော်နဲ့တိုင်ပြောမယ်၊)
အင်း လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာ ကိုယ့်လူတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ လူစားထိုးကြည့်ရင်း ရီချင်လာလို့ ဒီပိုစ့်ကို ရေးပါတယ်။ စိတ်ဆိုးရင်လဲ ပျော်စေပျက်စေ ကြည်စားတယ် သဘောထားပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ တကယ့်လူတွေကို မရေးရဲလို့ ကို့လူတွေနဲ့ပဲ ကိုရေးကြည့်တာပါ.။ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံထဲက ခင်ဗျ၊ အိမ်တံခါးလေး လာခေါက် ခဏလောက် လိုက်ခဲ့စမ်းပါ ဆိုတာမျိုးကြောက်လို့ပါ။ ဟား ဟား
နစ်နာစေလိုတဲ့စိတ် တိုက်ခိုက်လိုတဲ့ စိတ် မရှိပါ။ ဒီနာမည် ဒီလူတွေက တွေ့နေကျ နာမည်ကြီးတွေဆိုတော့ ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်းဆင်လိုက်တာပါ။ ဆောရီးနော် ……မှော်ဆရာ
နောက်ဆုံးရရှိသော ခိုင်လုံသည့် သတင်းများအရ ရွာထဲသို့ မြန်မာစစ်တပ်မှ ထောက်လှမ်းရေးများ ရွာသားဟန်ဆောင်ပြီး အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
ငှက္ကဌကြီး ဦးခိုင်က ထမင်းစားဖိတ်ချင်လို့တဲ့ …
အားလုံး ပျော်စေပျက်စေ ပါနော …….
တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ကိုယ့်လူတွေကို လူစားသွင်းကြည့်တော့ ရီချင်သလိုလို ဖြစ်လာလို့ စိတ်ကူးရတဲ့ အတိုင်း ရေးတင်ကြည့်တာပါ။
စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်လဲ တကယ်ပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဘာမှ စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့ ။ လူစားသွင်းရေးတယ်ပဲ သဘောထားပါ ။
နစ်နာစေလိုစိတ် ၊ တိုက်ခိုက်လိုစိတ် လုံးဝ မရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း တောင်းပန်ပါသည်။ ဦးခိုင်အစ ကိုကြောင်ကြီး အဆုံး မဝေေ၀ အလယ်ပါ
နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဝေေ၀ကို ထားရင် .. ဘယ်သူရှုံးမလဲ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ..
မှော်ဆရာ၏ တောင်းပန်းချက်အား ဒေါ်ဝေေ၀မှ လုံးဝစိတ်မဆိုးပါကြောင်း …
ဒေါ်ဝေေ၀သည် စွမ်းအားရှင် ဖြစ်ချင်လွန်းသဖြင့် အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစသည့်အသင်းများတွင် အသင်းဝင်ပါရစေဟု အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့ဖူးသော်လည်း ခွေးပစ်သည့်ဒုတ်လောက်သာရှိသော သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီး မည်သည့်အဖွဲ့ကမှ လက်မခံခဲ့ပါကြောင်း၊ အသက်ပြည့်ပါသည်ဟု မှတ်ပုံတင်ပြပါသော်လည်း မယုံကြပါကြောင်း၊ အလွန်စိတ်ဓါတ်ကျနေစဉ် ဒီရွာထဲကို ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ၀င်ရောက်လာပါကြောင်း၊ ရွာထဲမှသူများက ရုပ်မတွေ့ရဘဲ အလိုအလျောက် စွမ်းအားရှင်ဟု ကင်ပွန်းတပ်လိုက်သဖြင့် အလွန်ဘ၀င်မြင့်သွားကာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်သွားပါကြောင်း မှော်ဆရာသတင်းတိုက်အား အင်တာဗျူးမမေးပါနဲ့နှင့် တာဝန်သိစွာ သတင်းပေးလိုက်ရပါသည် …
ဒူ .. ဝေ … ဝေ ……
၀န်ကြီးချုပ်..၀န်ကြီးချုပ်ဟု ..မှားယွင်းသုံးစွဲနေသဖြင့် လွန်စွာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရကြောင်း..။
ငှက်ကထ သုံးသည်မှာလည်း ..သွားလေသူကြီးအမည်နှင့် ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်နေသဖြင့် .. မကြိုက်ကြောင်း..။
နောင်အခါတွင် .. မီဒီယာများမှ .. မိမိအား.. အကြီးအကဲဟု ..ရေးကြစေလိုကြောင်း..။
မိမိမှာ .. အိမ်ရှိကြွက် ၅ကောင်ကို .. စွမ်းအားရှင်ဆူးယူလာသော ..အာဖရိကတိုက်မှ အမျိုးအမည်မသိရသည့်အပင်များအတွင်း ပစ်ထည့်ပြီး ပြန်ဖေါ်လိုက်ရာ.. ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသွားကြသဖြင့် .. ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင် .. အကြီးအကဲကြီးဟု.. နောင်တွင်အမည်သုံးစွဲကြစေလိုကြောင်း..။
ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင် .. အကြီးအကဲကြီး မှ post တ ပုဒ် လျှင် ဘယ်လောက် နှုန်း ဟု သတ်မှတ် ခါ ကြိုတင်မဲများ ဝယ် ထားကြောင်း
စွမ်းအားရှင် ဒေါ်ဆူး မှလဲ လိင်တူချစ်သူများ ပါတီကို မဖွယ်မရာ နည်းများသုံးကာမဲဆွယ်သည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားကြောင်း
ဒေါ်ဝေဝေမှ ပါတီဝင်များ သည် တိုင်းပြည်တိုးတက် ချင်းထက် ဝေလေလေများ ကို သာပိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း တကိုယ်တော်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင်ပြောကြားသွားသဖြင့်
ပါတီဝင်များအမြှီးကုပ် နေရ ကြောင်း
blog ကြို blog ကြား တွင်ပါတီဆိုင်း ဘုတ်တွေ ပိုပိုများလာနေပြီး
ဟို လူ ဘယ်လောက် Ks ဒီလူ ဘယ် လောက် Ks ဆိုပြီး တဝက်တပျက် လမ်းခင်းပြထားမှူ့များကြောင့်
ဒီပါတီနိုင်မှာ သေခြာ သလောက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပါတီဖမ်းပင်ထားသော်လဲ
အကြီးအကဲကြီး မှ ကွန်နက်ရှင်တောင်ကောင်းအောင်မဖန်တီးပေးခြင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရပါကြောင်း
loading ကြာခြင်းကို အမြန်မဖြေရှင်းပါက ပါတီဝင်များလျော့နည်း သွားချေရှိ ကြောင်း
၀က်ကြီးချုပ်.. အဲ.. ၀န်ကြီးချုပ်က ဘွဲနာမည်တောင် ခံယူပြီးပါကကောလား။
မှော်ဆရာရေ… ကျန်ခဲ့တယ် ((နစ်နာစေလိုစိတ် ၊ တိုက်ခိုက်လိုစိတ် လုံးဝ မရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း တောင်းပန်ပါသည်။ ဦးခိုင်အစ ကိုကြောင်ကြီး အဆုံး မဝေေ၀ အလယ်ပါ)) ဆူးကိုတော့ နာမည် တွင်တွင်သုံးပြီး.. ဆူး ကျတော့ မပါဘူး။ အဲလို လူကြီးတွေဘဲ အလိုက်သိတော့ စွမ်းအားရှင် စိတ်တိုတာပေါ့ဟေ..
အင်တာနက် ကွန်နရှင်ကောင်းအောင် ဘိုးတော်သိကြားမင်းအား ပုဒ်မ(၄) နဲ့ ညီအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့..။
မြန်မာပြည်၏ အထူး ဥပဒေသမှာ ပုဒ်မ(၄) ၊နဲ့ ညီရပါမည်တဲ့။ ဘယ်နေရာ..ဘာကိစ္စမဆို ပုဒ်မ(၄)/ပေးမှလုပ်ကြပါသတည်း။
တယ်ဟုတ်နေကြပါလား ကိုယ့်လူတို့၊ ဒီလိုကျတော့လဲ ရွာသားအချင်းချင်း စည်းလုံးကြောင်း ထောက်ခံချက်ရသလို ပါလား